Dukaameeyaha Hantida Iibka iyo Ijaarka dul Realtyww Info
Dukaameeyaha Hantida gudaha Barrington
Dukaameeyaha Hantida gudaha Illinois
Dukaameeyaha Hantida gudaha Cebu
Dukaameeyaha Hantida gudaha Thornton
Dukaameeyaha Hantida gudaha Colorado
Dukaameeyaha Hantida gudaha Montréal
Dukaameeyaha Hantida gudaha Québec
Dukaameeyaha Hantida gudaha Long Beach
Dukaameeyaha Hantida gudaha New York
Dukaameeyaha Hantida gudaha New York City
Dukaameeyaha Hantida gudaha Canon City
1 - 10 ee 10 Liisaska
Waxa daabacay Muzammil
arag Dukaameeyaha Hantida la daabacay 1 month ago
Waxa daabacay Property Up
arag Dukaameeyaha Hantida la daabacay 5 months ago
Waxa daabacay Dick Sudduth
arag Dukaameeyaha Hantida la daabacay 9 months ago
Waxa daabacay Debbie Warford
arag Dukaameeyaha Hantida la daabacay 2 years ago
Waxa daabacay ProVest Real Estate Services
Waxa daabacay Greg Keating
Waxa daabacay Landmark Group
Waxa daabacay clifford ament
arag Dukaameeyaha Hantida la daabacay 3 years ago
Waxa daabacay Joy Peter
Waxa daabacay Tyson Cool
Dukaanle iibsi ama iibsadeyaasha guryaha kireeya (oo badanaa loo yaqaan wakiilka guryaha) waa shaqsi dhexdhexaadiye ka ah iibiyaasha iyo iibsadayaasha guryaha / ma guurtada iskudaya inuu isbarbar dhigo iibiyaasha raba inay iibiyaan iyo iibsadayaasha doonaya inay iibsadaan . Waddanka Mareykanka, xiriirka waxaa asal ahaan lagu aasaasay iyada oo loo tixraacayo sharciga guud ee Ingiriiska ee wakaaladda, iyadoo uu ganacsadeha xiriir wanaagsan la leeyahay macaamiisheeda ama macaamiisheeda. Dukaanleyda guryaha kireysan ayaa sida caadiga ah hela lacag la yiraahdo komishan si guul leh ugu waafaqaya iibiyaha guryaha iibiyaha iyo iibsadaha sida iibka la sameyn karo. Guddigan waxaa loo qeybin karaa la-hawlgalayaasha kale ee ka qeyb qaadanaya ama wakiillada marka ay quseyso. Wakiilka guryaha, oo ah eray loo isticmaalo Boqortooyada Midowday, waa shaqsi ama shirkad ganacsi oo ganacsigooda ay tahay inay ku iibiyaan guryaha dhismaha iyagoo ka wakiil ah macaamiisha. Waxaa jira farqi weyn oo u dhexeeya ficilada, awoodaha, waajibaadka iyo mas'uuliyadaha dillaaliinta iyo wakiillada guryaha ee waddan kasta. Wadamada kale waxay qaataan qaabab aad u kala duwan oo suuq geynta iyo iibinta hantida dhabta ah. Dalka Mareykanka, si kastaba ha noqotee, dillaaliinta guryaha iyo iibiyaasha ka caawiya milkiilayaasha suuq geynta, iibinta, ama ijaarashada guryaha waxaa caadi ahaan loo yaqaan "liistada dillaaliinta" iyo "wakiillada liistada."  Liistada dillaaliinta iyo wakiiladu waxay raadiyaan inay suuq gadaan ama iibiyaan ama kireeyaan hanti qiimahooda ugu sarreeya ee hoos yimaada shuruudaha ugu fiican ee la heli karo. Dallaaliyeyaasha kale iyo wakiiladu waxay diiradda saari karaan inay matalaan iibsadaha ama kiraystayaasha. Si kastaba ha noqotee, shati qaadashada sida dillaaliyu ama iibiyahu wuxuu u oggolaanayaa shati bixiyaha inuu matalo dhinacyada labada dhinac ee macaamil ganacsi. Xulasho kooxdee matalaysa waa go'aan ganacsi oo liisanka haysta.